China OPR Magnesium Tourmaline Negative Ion Ball ho an'ny orinasa sy mpamatsy rano fisotro | Huabang
OPR Magnesium Tourmaline Negative Ion Ball ho an'ny rano fisotro
Karazana: baolina magnesium OPR. tourmaline alkaline baolina, maifan baolina ara-pahasalamana, lavitra-infrared baolina, tourmaline ion ratsy baolina. baolina misy hydrogène……
Function: ho an'ny rano fisotro, vokatra kosmetika, vokatra sakafo sns.
Misy electrodes tsara sy ratsy ao amin'ny baolina ion ratsy. Raha vao mifandray amin'ny rano izy dia afaka mamoaka ny rivotry ny rano avy hatrany. Ity ankehitriny ity no 0.06MA mety indrindra ho an'ny vatan'olombelona. Rehefa mifandray amin'ny courant malemy ny rano, dia misaraka ny ion hydrogen sy oxyhydrogen ao amin'ny molekiolan'ny rano manodidina. Amin'ny lafiny iray, ny ion hydrogène dia mitambatra amin'ny elektrôna mba hamoronana hidrôzenina, ary ny ion oksizenina hidrôzenina dia mitambatra amin'ny molekiolan'ny rano manodidina mba hamoronana akora mavitrika mifandray ary hamokatra avo 300 heny ny ion ratsy.
Ny baolina ion ratsy dia afaka mamoaka ion ratsy cathode marobe, ary ny pyroelectricity, piezoelectricity ary ny famokarana herinaratra dia tena manan-danja. Misy fiantraikany amin'ny fampihenana, afaka manakana ny lo ny sakafo, ny deodorization vokany dia enina heny noho ny activated karbaona, mety ho tena lavitra ny infrarouge taratra sy hampiroborobo ny taranaka vaovao fisaorana. Ity vokatra ity dia semi-permanent.
0.5-1.5mm, 2-3mm, 3-4mm, 4-5mm, 5-6mm, 6-7mm, 7-8mm, 8-9mm, 9-10mm.
1. Ataovy kely kokoa ny vondrona molekiolan'ny rano, mora miditra amin'ny fonon'ny sela, mampitombo ny asan'ny sela, ary mampitombo ny hery fiarovan'ny olombelona.
2. Esory ny fofona hafahafa sy ny sisa tavela amin'ny rano, esory ny akora manimba sy ny carcinogens.
3. Ny kalitaon'ny rano dia malemy sy alkaline, izay manampy amin'ny fifandanjana asidra-base sy ny fifandanjana ara-tsakafo amin'ny vatan'olombelona.
4. Manankarena kalsioma, manezioma, sodium, potasioma ary singa hafa ary mineraly isan-karazany takian'ny vatan'olombelona.
5. Ny conductivity avo, ny mety ho fihenan'ny oxidation-reduction (OPR), mampiroborobo ny fandevonan-kanina, misoroka ny fahanterana, ary mahazo tombony amin'ny faharetana.
6. Ao anatin'ny toe-javatra rehetra toy ny tara-masoandro, ny mari-pana ary ny tsindry, dia tsy miova ny fahombiazan'ny vokatra sy ny toetrany. Mety amin'ny fikarakarana rano fisotro sy fitsaboana rano fandroana.
teo aloha: Tourmaline baolina
Manaraka: Maifan Stone Ball ho an'ny vato maifan hanatsarana ny kalitaon'ny tany
Baolina seramika ho an'ny fikarakarana rano
Baolina infrarouge lavitra
PH Ceramic Ball
tourmaline Alkaline Ball
tourmaline ion négatif baolina
Baolina seramika afovoany alumina madio 99.95% amin'ny ...
Maifan Stone Ball ho an'ny vato maifan ho improvin ...
Factory Direct Negative Ion Ceramic Ball
OPR magneisum ball ho an'ny fikarakarana rano fisotro